Shaqo doonkii Muqdisho ee toban bilood ka hor oo hadda dadka shaqo siiya - BBC News Somali
12 Juunyo 2019
Image caption Shaqo la'aanta Muqdisho ayaa dhib ku heysa dhalinyaro badan
Dhibaatooyinka Shaqo la'aanta ee ka jira Soomaaliya ayaa gaaray heerkii ugu xumaa, waxaana dhalinyaro badan ay la yimaadaan fikrado ay ku dirayaan farriimahooda shaqo doonka ah.
Wuxuu ku qoray, 'fadlan i shaqaaleysii', taas oo guul uu ku gaaray.
Lahaanshaha sawirka Astaan
Image caption Abuukar Axmed Xuseen oo shaqo ka heley shirkadda Astaan
"Dhowr bilood kahor markii aan boorka dhajistay, ilaa hadda, nolosheyda wax badan ayaa iska baddalay marka la eego dhinaca hormarka, tusaale ahaan, xafiiska shirkadda Astaan Tv waxaa la iiga qoray shaqaale caadi ah, isla xafiiskii ayaan maanta ka ahay qofka dadka shaqaaleysiiya, oo maamulkii ayaan qeyb ka noqday," ayuu yidhi Abuukar.
Laakiin isaga kaliya ma ahayn dhalinyarada shaqo la'aanta ah, inkastoo uu fikir cjiib ah ku helay shaqadiisa.
Wiil ‘Astaan’ u noqdey shaqo la’aanta ka jirta Soomaaliya
"Wacyigelin kaddib waxaa isbadelay fikirkii ay bulshada Soomaaliyeed ka aaminsanayd xirfadahan"
Wiil dhalin yaro ah ayaa u dabaal dagay sanad guuradiisii 1-aad ee shaqo la'aanta uu ahaa.
Image caption Fikirkan ayaa ah mid uu wiilkan ku dirayo farriin
Dabbaal daggan ayaa noqday mid aan horay loogu arag Soomaalida dhexdooda, laakiin waxa uu xambaarsan yahay farriin culus oo ku aadan dhibaatada shaqo la'aanta ee haysata dhalinyaro badan.
"Farriinta ugu way nee aan diraayo waxay tahay, Aniga hada waxaan dhigtay xaflad oo ah hal sano guuradaydii shaqo la'aanta, laakiin ma rabo inaan sanad kale dhigto xaflad noocaan oo kale ah. Waxaan farriintaan gaarsiinaya shirkadaha laga shaqeeyo, ha ahaadaan kuwa dowladda ama kuwa sida gaarka ah loo leeyahay, waxaana ka codsanayaa inay arimahaan soo fara galiyaan, dhalinyarada, ardayda wax baratay ee dalka ku nool qaarkood ayaa go'aansanaya inay tahriibaan, qaar kale ayaa raba inay dhigtaan xaflado noocaan oo kale ah, waxay u baahan yihiin in shaqooyin la siiyo".
Image caption Sanadkii 2017-kii waxaa jaamacadaha Muqdisho ka qalin jabiyay 11 kun
Heerka shaqa la'aanta Soomaaliya ayaa aad sarreeya, wuxuuna saameeyay dhallinyaro badan oo ka soo baxa jaamacadaha dalka oo dhan. Taas waxay qaarkood ku khasabtay in ay la yimaadaan hab cusub oo ay baahidooda ugu gudbin karaan bulshada qeybaheeda kale.
Hay'ada iftin oo ka shaqeysa arimaha waxbarshada iyo shaqaaleysiinta ayaa sheegtay in Sanadkii 2017-kii ay jaamacadaha Soomaaliya ka qalin jabiyeen 11,000 oo arday, halka sanadkii 2018-kii ay ka qalin jabiyeen 15,000 oo arday.